Lyon oo wadahadalo horumar leh kula jirta Tottenham Hotspur oo ku aadan heshiiska Tanguy Ndombele. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Lyon oo wadahadalo horumar leh kula jirta Tottenham Hotspur oo ku aadan...
Lyon oo wadahadalo horumar leh kula jirta Tottenham Hotspur oo ku aadan heshiiska Tanguy Ndombele.
Lyon ayaa lagu soo waramayaa inay gashay wadahadalo horumarsan oo ku saabsan heshiis ay dib ugula soo wareegayaan Tanguy Ndombele oo ka tirsan Tottenham Hotspur .
Laacibka reer France ayaa ku yimid Waqooyiga London heshiis 54 milyan ginni ah oo uu kaga soo biiray Les Gones xagaagii 2019 laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu wax ka bedelo kooxda oo uu hogaamiyo tiro badan oo tababarayaal ah.
Paris Saint-Germain ayaa markii hore loo malaynayay inay madax ka ahayd safka loogu jiro saxiixa Ndombele, laakiin tallabada loo malaynayo inay burburtay ka dib markii ay PSG ku guuldareysatay inay iska iibiso ciyaaryahan khadka dhexe ah.
Haatan khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano ayaa soo wariyay in Spurs ay haatan ku dhowdahay inay ku soo laabato Lyon, iyadoo wadahadalada labada dhinac ay haatan marayaan heer gabo gabo ah.
Romano ayaa intaa ku daray in Lyon ay rabto inay ku darto dookh halkii ay ka ahaan lahayd waajib ah inay iibsadaan heshiiska, Ndombele ayaa loo maleynayaa inuu quus ka taagan yahay inuu soo afjaro riyadiisii ​​Tottenham bishaan.
25-sano jirkaan ayaan ka ciyaarin Premier League tan iyo Boxing Day-ga, waxaana gabi ahaanba laga saaray kooxda isku dhacyo uu la galay Leicester City iyo Chelsea horaantii Janaayo.
Ndombele waxa uu leeyahay laba gool iyo caawin magaciisa 16 kulan oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan mana aha inuu noqdo wakiil xor ah ilaa 2025.
Qoor Qoor ma wuxuu doonaya inuu u tartamo madaxweynaha Soomaaliya?
Qoraalka Midowga Afrika oo lagu macneeyey ‘mid lagu sagootinayo’ danjire Madeira
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Emerson, Antonio Rudiger, Lacazette, Kylian Mbappe,...
Wararkii ugu dambeeyey doorashada guddoonka labada Gole ee BF
Jose Mourinho oo doonaya inuu Ruben Loftus-Cheek keeno Roma.
Qorshaha DENI ee haddii looga adkaado doorashada madaxweynaha oo la shaaciyey
Deg Deg RW Rooble oo ka adkaaday Midowga Afrika, Dhabarjabka Farmaajo,...
Manchester United oo Paul Pogba u soo bandhigtay heshiis uu ku...